अनलिमिटेड गिफ्ट भौचर पाउनुभयो भने तपाईंले किन्ने पहिलो प्राथमिकताका तीन चीज के-के हुन सक्छन् ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः भाद्र २७, २०७१ - साप्ताहिक
सबैभन्दा पहिले लेटेस्ट मोबाइल सेट किन्छु, अनि टन्नै रिचार्ज हाल्छु, त्यसपछि लाइफ टाइमसम्मका लागि नेट प्याकेज लिन्छु।
गिफ्ट भौचरमा पैसो १ सयजति मात्र भए रुमाल हरा'छ, रुमाल किन्थें। पैसो १ हजारजति भए फेसबुकमा प्रोगामको नयाँ तस्वीर राख्नै गाह्रो भो, नयाँ टिसर्ट किन्थे, अनि पैसो १ लाखजति भए ल्यापटप बिग्रिन ला'को छ, ल्यापटप किन्थें।
- हेमन्त शर्मा, गायक
तीन आधारभूत कुरा किन्थें, जुन कुरा पैसा भए पनि नेपालमा समय-समयमा अभाव भैरहन्छ। ग्याँस, पेट्रोल अनि चामल, बाँच्नु त पर्‍यो नि।
- दमन रूपाखेती, हास्यकलाकार
म त माइक्रोसफ्ट कम्पनी नै किन्थें, अनि क्लिनिक भन्ने कस्मेटिक कम्पनी पनि किन्थंे। तेस्रोमा चाहिँ पैसामा बिक्ने सबै नेतालाई किन्थंे अनि उनीहरूलाई थुनिदिन्थें। त्यसपछि हामी सबैको जीवन त्यसै सुखमय हुन्थ्यो।
- डा. निवेदिता बराल, गायिका
सुरुमा टक्सन कार किन्थें। त्यसपछि अनलिमिटेड सपिङ गर्थे अनि बालमन्दिरका बालवालिकाहरूका लागि पर्याप्त गिफ्ट र चकलेट किन्थें। तर यो अनलिमिटेड गिफ्टचाहिँ कहाँ मिल्छ होला हजुर भन्दिनुस् न, आजै गएर लिनुपर्‍यो।
- सुरबिना कार्की, नायिका
नेपालमा अहिलेसम्म नभित्रिएको फरारी गाडी किन्थें र नेपालकै पहिलो फरारी खरिदकर्तामा आफ्नो नाम दर्ता गराउने थिएँ। अर्को चन्द्रमा घुम्ने टिकट काटेर अन्तरिक्षको यात्रामा जान्थें। तेस्रोमा नेपालमा जति पनि बाढीपीडित छन्, उनीहरूका लागि बस्ने घर अनि जीवनभर पुग्ने खानेकुरा र कपडा किनिदिन्थंे।
- रजनी केसी, नायिका
तीन चिज किन्नुपर्ने ? दाल, चामल र तरकारी।
गिफ्ट भौचरमा के-के पाइन्छ भनेर थाहा दिनुपर्‍यो नि, त्यसपछि न के लिने भन्ने कुरा आउँछ।
- नलिना चित्रकार, गायिका
सभासदहरूले जनताको आवाज कहिल्यै सुन्दै सुनेनन्, उनीहरूका लागि जनताको आवाज सुन्ने मेसिन किनिदिन्थें। काठमाडौंका सम्पूर्ण बासिन्दाका लागि सुपरम्यानको लुगा किनिदिन्थें, जसले गर्दा गाडी नै चलाउनु नपरोस्। तेस्रोमा मापसे चेकिङले सबै साथी मारमा परेका छन्, उनीहरूका लागि मापसे चेकिङमा पर्दा जपासे (जलपान सेवन) देखाउने औषधी किनिदिन्थे।
- तेन्जिङ शेर्पा, इभेन्ट म्यानेजर